समय बदलिदिन्छ सपनाहरु भत्किन सक्छन्! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal March 28, 2021
भावना अधिकारी भुसाल,
सपनाहरु भत्किन सक्छन्!
वचनहरु फेरिन सक्छन्!
विश्वास ढल्न सक्छ ,
वाचाहरु तोडिन सक्छन्!
तर झिनो आशा बचाइराखौ
जिन्दगी फेरि मुस्कुराउन सक्छ……।